Home Wararka Yaa ka Maqan sawirkaan oo Cid walba oo Maxkamada Badda la socotay ...
Yaa ka Maqan sawirkaan oo Cid walba oo Maxkamada Badda la socotay ay Tabeysaa?
Intaan Meesha ka muuqataa shaqadooda waxay ahayd taageerayaasha dadkii shaqada waday, laakiin waxaa ka maqan Gabadhii Garyaqaannadda ahayd ee hawsha xoggeeda gacanta ku haysaya Muna Sharmani iyo Engineerkii hawsha badaha yaqaannay ee Eng. Maxamed Sh Saalixi ahn oo uu rabbi naga jeclaaday maalmo yar ka hor inta lagu dhawaaqin guushii uu soo jeeday.
Laakin Muna Rabbi ha xafidee waa noo joogtaa ee maxaa looga reebay kooxda tageysa ee dhageysaneysa xukunka ka dhshay shaqadii sharafta lahayd ee ay qabatay?
Aad ayaa loo tabayaa muuqaalkii laab qaboojinta lahaa ee Muna Sharmani ee Somalidu isku hubtay markey soo hor istaagto garsoorayaasha Maxakamadda Caalamiga ah inay garteeda u naqsan si xirfadeyan oo aqoon iyo waddanimo ku dheehan tahay.
Ka maqnaanta Sawirkan xusuusta weyn reebaya oo taariikhda galaya ee Muna waxay muujineysaa in Somalidu aysan weli kala baran dadkeeda kuwooda qiimaha leh ee wax badan u haraya inay inta kale wax noqoto. Dowladda waxaan ka rabnaa inay noo sheegto sababta aysan Muna Sharmaani uga muuqan sawirkan oo ay uga muuqdaan kuwa la isaga daray dano gaar ah oo laga leeyahay darted?
Dhinaca kale, Farmajo ayaa rabay inuu Igu sawir ku sameysto Guusha Maxakamadda oo uusan waxba ku darin intii uu joogay culeys inuu ku ahaa maahee. Wuxuu casuumad qorsheysan u diray madaxweynayashii hore sida Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh oo ah ninka ay Somalida badankeed ku barteen afkaaraha cadcad ee Dacwadda Badda iyadoo aan waxba loo dhimin diplomasiyadda Kenya iyo annaga naga dhaxeysa. Madaxweynayaasha waxay Farmjo u sheegeen inaysan guushan ahayn mid siyaasadeed ee ay tahay guul Somalida wada leedahay marka guddi dhexdhexaad ah u saar oo barnaamijka xafladda ha noqdo mid la wada leeyahay , hasa yeshee Farmajo oo rabay inuu olole doorasho ka dhigto oo igu sawir ka sameysto waa uu diiday taas, iyagana waa diideen inay u yimaadaan.